Noqo Habka ugu Wanaagsan ee Cunno Miisaamidda iyo Baakadaha Soo saaraha iyo Warshada |Xingyong
1.Fully si toos ah u dhamaystiraya habka quudinta, miisaanka, buuxinta bacda, taariikhda daabacaadda, wax soo saarka alaabta la dhammeeyey.
2. Saxnimada sare iyo xawaaraha sare.
3.Ku dabaqi kara agabyo kala duwan.
4.Ku dabaqi kara macaamilka oo aan lahayn shuruudo gaar ah oo baakadaha iyo walxaha si ballaaran loo isticmaalo.
1. Wax ku ool ah: Bac - samaynta, buuxinta, xidhida, jarista, kulaylinta, taariikhda/lambarka bakhtiyaa-nasiib ee lagu gaadhay hal mar.
2. Caqli badan: Xawaaraha xirmada iyo dhererka bacda waxaa lagu dejin karaa shaashadda iyada oo aan qayb isbeddelin.
3. Xirfadda: Xakamaynta heerkulka madax-bannaan oo leh dheelitirnaanta kulaylku waxay awood u siinaysaa alaabta baakadaha kala duwan.
4. Sifada: Shaqada joojinta otomaatiga ah, oo leh hawlgal ammaan ah iyo badbaadinta filimka.
5. Ku habboon: Khasaare hooseeya, badbaadinta shaqada, sahlanaanta hawlgalka iyo dayactirka.
* Mashiin baakad toos ah oo toosan
* Miisaanka madaxa badan
* Madal shaqaynaysa* Gaadhida alaabta nooca Z
* Quudiye gariir
* Gaadhida alaabada dhammaatay+ jeeg miisaaniye
Hore: Mashiinka baakadaha tooska ah ee burka iyo budada
Xiga: Cunto fudud oo Toomaatig ah Chips-ka Mooska
baakooyinka xal furaha
Mashiinka Xirmooyinka Toosan
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Suunka Gudiyaha Korontada, Gaadhida suunka, Qaadista suunka tubbada, Gaadhida Skirt Skirt, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Baakadaha suunka wareejinta, Dhammaan Alaabta